အလိုလိုသိသောကုထုံးများသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာမှုကို တိုးပွားစေနိုင်သည် - ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ် - shopgiejo.com
လူများစွာသည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဖြည့်စွက်အားဆေးများ သောက်သုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် မှန်ကန်စွာ စားသုံးကြသည်။ သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရန် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကတိပြုချက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအားလုံးပြီးလို့ မင်းမှန်တယ်လို့ မခံစားရတဲ့အခါ မင်းဘာလုပ်မလဲ။
ရှုပ်ထွေးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်းသည် ပဟေဠိတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားခြင်းနှင့် တူသည်။ လူတွေဟာ အဖြေကိုရှာဖို့ ဆရာဝန်ဆီကနေ ဆရာဝန်ဆီ သွားလေ့ရှိတယ်။ မည်သို့ပင် ကြိုးစားကြသော်လည်း အကောင်းဆုံးပုံစံတွင် သက်သာသည်ဟု မခံစားရသေးပေ။ အမှောင်ထဲမှာ မှားမိသလို ခံစားရတဲ့အခါ အဖြေရှာဖို့ စိန်ခေါ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင် အလိုလိုသိနိုင်သော ကုထုံးအပိုင်းက ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အချိန်၊ ငွေ၊ နှင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရင်းခံအကြောင်းအရင်းနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ အရင်းခံပြဿနာကို ရောက်ရှိလာခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်သည်။
လူများသည် နာတာရှည်ဖျားနာမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှု သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မအီမသာဖြစ်ခြင်းကြောင့် SoulHealer.com တွင် အလိုလိုသိနိုင်သော ကုထုံးအစီအစဉ်များကို အချိန်ဇယားဆွဲကြသည်။ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ကုထုံးများကို ပေးလေ့ရှိသည်။ လူအများစုသည် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသနည်း၊ ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့လုပ်နိုင်သည်ကို နားလည်လိုကြသည်။
အဆုံးစွန်သော၊ သူတို့သည် သူတို့၏ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ချင်ကြသည်။ ပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို ဘယ်သူက ဖုံးကွယ်ချင်မှာလဲ။
အလိုလိုသိနိုင်သော ကုထုံးသင်တန်းများသည် မြန်မြန်ဆန်ဆန်၊ လွယ်ကူသည်၊ နာကျင်မှုမရှိသည့်အပြင် ဤပန်းတိုင်ကိုရောက်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အလိုလိုသိနိုင်သော ကုထုံးကဏ္ဍတစ်ခုသည် ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ကွဲလွဲနေသော အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကာ၊ အခြေအနေတစ်ခုအတွက် နက်နဲသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို တင်ပြနိုင်သည် သို့မဟုတ် မတူညီသောရှုထောင့်ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်အား ခက်ခဲသော အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ကြည့်ရှုရန် နည်းလမ်းအသစ်၊ ဆန်းသစ်ပြီး အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု ပေးခြင်းဖြင့် သင့်အား ခွန်အားပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြဿနာ၏ အသွင်အပြင်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး မည်သည့်အရာက လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့် အလုပ်မဖြစ်သောအရာကို သင့်စိတ်ထဲတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးစိတ်ဝင်တစား သိရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ဤအလိုလိုသိသော ဆက်ရှင်များသည် သင့်ဘဝကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တက်စေပြီး နောက်တဖန်ရှေ့ဆက်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော ကုထုံးသည် မကြာခဏ ကုသခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် ရိုးရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကြီးမားသော ဆက်စပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်စိတ်၊ PTSD နှင့် စိတ်ဒဏ်ရာများကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသည် ဤအခြားရွေးချယ်စရာကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် အံ့သြဖွယ်သက်သာမှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
SoulHealer.com ကို တည်ထောင်သူ ဒေါက်တာ Rita Louise သည် အစားအသောက်နှင့် အာဟာရများ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ကုထုံးများ၊ သတိတရားထိုင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ကုသခြင်း၊ လမ်းညွှန်ထားသော ပုံရိပ်များ၊ ပန်းအနှစ်များ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီများနှင့် အခြားသော သဘာဝကုထုံးများအကြောင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အသိပညာ ရှိပါသည်။ သူမသည် aura၊ chakras နှင့် အခြားသောသိမ်မွေ့သောစွမ်းအင်စနစ်များနှင့် သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို ပြင်းပြစွာနားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ သူမသည် Berkeley Psychic Institute မှဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပြီး hypnotherapy၊ Reiki၊ လမ်းညွှန်ချက်ပုံရိပ်များ၊ သတိပဋ္ဌာန်နှင့် အခြားအရာများအပါအဝင် ဘဝလေ့ကျင့်ရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များစွာတွင် လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။
သူမသည် မည်သည့်ကျန်းမာရေးကိုမဆို စိုးရိမ်ရသည့် မူလဇစ်မြစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကဲဖြတ်ပေးပါသည်။ နေမကောင်းသောလူသည် အစားထိုးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားများအပြင် ပင်ကိုယ်စိတ်ထက်သန်သူနှင့် လက်တွဲလိုသည့်သဘောမျိုးသာဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ရီတာ- အဲဒါ သူ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ သူ လိုက်နေတယ်။
ဒေါက်တာ Rita Louise က သူ့ဘဝအတွက် ဦးတည်ချက်အတွက် အစောပိုင်း ကလေးဘဝ လွှမ်းမိုးမှုများကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။ သူမသည် အသက် 12 နှစ်တွင် ESP ၏ သဘောတရားကို စူးစမ်းလေ့လာသည့် ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးနှစ်ခုမှ လှုံ့ဆော်မှုခံခဲ့ရသည်။ ယင်းကြောင့် သူမအား ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကို ပြည့်စေမည့် မမြင်နိုင်သော စွမ်းအားများကို ထိတွေ့နိုင်စေရန် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို ရှာဖွေရန် လမ်းစကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
သူမသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ ဒဿနိကဗေဒ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုးတက်မှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လောကုတ္တရာပညာ၊ နှင့် Esoteric အနုပညာနှင့် သိပ္ပံများ အပါအဝင် အကြောင်းအရာများကို စတင်လိုက်စားခဲ့သည်။ ဘာကလေ စိတ်ပညာအင်စတီကျုတွင် တရားထိုင်ခြင်း သင်ယူခဲ့သည်။ စွမ်းအင်ဆေးလုပ်ဆောင်နည်းတို့ကို လေ့လာခဲ့သည်။ အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော ဥာဏ်ဖတ်များ.
ကိုယ်ပိုင်အလေ့အကျင့်ကို ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် သူမ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးရန် သူမ၏ အသိပညာရှာဖွေမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Dr. Rita သည် Naturopath အဖြစ် ဘွဲ့ရပြီး Ph.D ကို အချိန်ပြည့် ကျောင်းပြန်တက်ခဲ့သည်။ Natural Health Counseling တွင် သူမသည် Reiki Master၊ Certified Hypnotherapist၊ Certified Happiness Coach နှင့် Certified Mindfulness Practitioner တို့၏ ထူးခြားချက်ကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဖိနပ်ကြိုးဆွဲထားရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်ပတ်တာက အဆုံးမသတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်း သူမသဘောပေါက်ပါတယ်။ မားကတ်တင်း၊ မားကက်တင်း၊ မားကတ်တင်းနှင့် ပတ်သက်သည်။ သင်ဘယ်သူလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် သင်ကမ်းလှမ်းတာတွေကို လူတွေမသိရင် သင့်ဖုန်းက ဘယ်တော့မှ မြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမ၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များစွာကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး စာအုပ်ခြောက်အုပ်၊ ရာနှင့်ချီသော ဆောင်းပါးများကို ရေးသားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပုံနှိပ်နှင့် အွန်လိုင်းတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ရေဒီယိုရှိုးတစ်ခု (Just Energy Radio) ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး North End Psychic Fair ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။ Church of Divine Man တွင်၊ Holistic Chamber of Commerce အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် အမှုထမ်းခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် သူမသည် International Association of Medical Intuitives အတွက် ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှ ဗိသုကာပညာရှင်ဖြစ်သည်။ အသုံးချစွမ်းအင်သိပ္ပံ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ပင်ကိုယ်သဘော၊ အလိုလိုသိနိုင်သော အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ဆေးပညာဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များတွင် ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
ယုံကြည်ခြင်းကို ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းသည် မည်သူမဆိုအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး သင်သည် သင်၏အချိန်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဂုဏ်သတင်းကို လိုင်းပေါ်တင်လိုက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် အပြင်းထန်ဆုံးသူများကိုပင် ကြောက်လန့်စေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို လုပ်တဲ့အခါ၊ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုတာကို လုပ်တဲ့အခါ၊ အများစုအတွက် စိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အရာက တခြားသူတွေကို ကြည်နူးစေနိုင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ Rita သည် Berkeley Psychic Institute တွင် ပညာသင်ကြားပြီးသည်နှင့်၊ သူမ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအသစ်ကို စတင်ရန် အချိန်တန်ပြီဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ဖောက်သည်များနှင့် လက်တွဲရန် တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ Indeed သို့မဟုတ် Monster.com တွင် ကြော်ငြာထားသော အလိုလိုသိနိုင်သော ကုထုံးပညာရှင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ (ယခုထိမရှိပါ)။ ဒီလို အစားထိုးကျန်းမာရေးပုံစံကို စိတ်ဝင်စားမှုဟာ အစွန်းတစ်ဖက်မှာ အများကြီးရှိနေပေမယ့် အဲဒါအတွက် စျေးကွက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သူမသိပါတယ်။ သူမသည် ဤနယ်ပယ်တွင် အလုပ်သွားလုပ်မည်ဆိုပါက ဦးဆောင်သူနှင့် ဖောက်သည်များဖန်တီးရန်အတွက် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကို ပုံဖော်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူမ ချက်ချင်းသိလိုက်ရသည်။
သူမ၏ တိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် သူမ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က အင်တာနက်သည် အသစ်ဖြစ်ပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်များသော်လည်း အင်တာနက်သည် ကုန်ကျစရိတ်၏တစ်စွန်းတစ်စမျှသာရှိသော ပုံနှိပ်ကြော်ငြာတွင် ရှာမတွေ့နိုင်သော အလားအလာရှိသော ချဲ့ထွင်သောလက်လှမ်းမီမှုကို ပေးဆောင်သည်။ သူမသည် စိတ်တူကိုယ်တူ ဆိုက်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သူမ၏ အလုပ်အပေါ် အာရုံစိုက်စေရန် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်စာမျက်နှာများတွင် နေရာချထားရန်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေး ဆောင်းပါးများကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုမိုးရှင်း၏ လွယ်ကူမှုနှင့်အတူ ဒေါက်တာ Rita သည် ကောင်းချီးခံစားရသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စိန်ခေါ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အစားထိုးကျန်းမာရေးပုံစံများဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဟူသော အယူအဆသည် ကျေးဇူးကြီးမားလှပါသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် အလိုလိုသိသာသောကုထုံးများကို ပေးဆောင်သည့် လေ့ကျင့်သူအရေအတွက်နှင့်အတူ အဆမတန်ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ဝဘ်စာမျက်နှာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများသည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က ကောင်းမွန်သော အလေ့အကျင့်ဟု ယူဆခဲ့သည့်အရာသည် ယခုအခါတွင် မျက်မှောင်ကြုတ်သွားခဲ့သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နယ်ပယ်တွင် ဤအပြောင်းအလဲများသည် သူမ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ချိန်ညှိစေခဲ့သည်။ သူမသည် သူမ၏အမည်နှင့် မက်ဆေ့ချ်ကို ရယူရန်အတွက် အခြားနည်းလမ်းများကို အမြဲတစေ ရှာဖွေနေပါသည်။ ဒေါက်တာ Rita တွင် သူမသည် အနာဂတ်အတွက် စုံစမ်းရမည့်အရာများ အပြည့်အစုံရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် သူမ၏ ရေဒီယိုရှိုးကို ပြန်လည်စတင်ခြင်း၊ အခြားစာအုပ်ရေးခြင်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းတွင် ကျင်းပခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သူမသည် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် နောက်ထပ် ရေဒီယို၊ တီဗွီနှင့် ညီလာခံပွဲများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူအသစ်များအတွက် Dr. Rita ၏ အကြံဉာဏ်
လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်ပတ်ခြင်းသည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလိုလိုသိနိုင်သော အကြံဉာဏ်များ ပေးဆောင်သည့် ကဏ္ဍများတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဖွင့်လှစ်ရန် စိတ်ကူးယဉ်ထားသော ဖောက်သည်များစွာနှင့် လက်တွဲခဲ့ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် သင်သည် သင်၏အချိန်ဇယားကို သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သင်အလိုရှိသည့်အချိန်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိသော အားလပ်ရက်များကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်သည်ဟု သူတို့ထင်မြင်ကြသည်။ သင်သည် စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်၊ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ထောင်ရန် သို့မဟုတ် ပွဲတစ်ခုကျင်းပသည့်အခါ လူအများက သင့်ထံသို့ သဘာဝအတိုင်း ဝိုင်းအုံလာလိမ့်မည်။
တကယ်တော့ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ အချိန်နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်၊ သင့်ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ကြော်ငြာခြင်းအပြင်တွင် ကြော်ငြာခြင်းမပြုပါက သင့်အား မည်သူမျှ ရှာတွေ့မည်မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းသေးသေးလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်ဦးတည်း ပိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ဆိုရင် အလုပ်မလုပ်ရင် ငွေမရှာတတ်ဘူး ။
စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာက အံ့သြစရာကောင်းတာက 9-5 အလုပ်နဲ့ မတူပါဘူး။ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြီးတာနဲ့ သူ့ဘာသာသူ ဂရုစိုက်မယ်လို့ ယူဆလို့ အော်တိုလေကြောင်းလော့ကို ထားရစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေသည် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တိုင်း၏ အိပ်မက်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ လက်တွေ့ဘဝမဟုတ်ပေ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုဖွင့်တဲ့အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကတော့ မင်းတာဝန်ယူတဲ့အခါ မင်းဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲ ဒါမှမဟုတ် မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းကို ပြောပြမယ့်သူမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ သင့်တွင် သူဌေးမရှိပါ - သင်က သူဌေးဖြစ်ပြီး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ချမှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင် သင့်အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်သူတစ်ဦးကို သင် ငှားရမ်းနိုင်သည် ခွင့်မပြုသော်လည်း ဤလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်ရှုရန် သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ မင်းမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှိလို့ ကံကောင်းတယ်ဆိုရင် ဒီတာဝန်တွေကို လွှဲအပ်နိုင်ပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုတစ်ခုကို လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ယောက်တည်းနဲ့ စတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ရီတာ၏ အကြီးမားဆုံး အကြံပြုချက်မှာ သင့်စိတ်ကူးများ အကောင် အထည်ပေါ်စေရန် သင့်ကိုယ်သင် ကတိကဝတ်ပြုလိုသည့် အဆင့်ကို ခဏလောက် ကြည့်ပါ။ လုပ်ငန်းတစ်ခုစဖွင့်သောအခါတွင် ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်များနှင့် အဆိုးများအတွက် ရေရှည်တွင်ရှိနေရမည်။ ၎င်းတွင် သင့်တွင် တစ်နေ့တာအလုပ်ရှိပါက မကြာခဏ မခံစားရနိုင်သော ဖိအားများ ပါ၀င်သည်- အရောင်းနှေးသော ရက်များ၊ သီတင်းပတ်များ သို့မဟုတ် လများ ၊ သင့်နည်းပညာများ ပြတ်တောက်သွားသောအခါ နှင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အရာများ ဖြစ်နေသည့်တိုင်၊ သင်၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်၊ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ နဲ့ နည်းပညာတွေရဲ့ ထိပ်တန်းအစွန်းမှာ ရှိနေဖို့ အမြဲတမ်း တိုးတက်အောင်၊ မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ရောမမြို့ကို တစ်ရက်တည်းနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တာမဟုတ်သလို မင်းရဲ့စီးပွားရေးလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့ပြောကြတယ်။ စီးပွားရေးလောကတွင် အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သောအရာများ ရှိလျှင် ထိုပထမခြေလှမ်းကို လှမ်းပြီးမှသာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Rita Louise အကြောင်း
တည်ထောင်သူ SoulHealer.comDr. Rita Louise သည် သဘာဝဆိုင်ရာ သမားတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူ့အလားအလာနယ်ပယ်တွင် အနှစ် 20 သက်တမ်းရှိ ဝါရင့်တစ်ဦးဖြစ်သည်၊ သို့သော် အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ ၎င်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော ဉာဏ်အလင်းရရှိစေသည့် သူမ၏ထူးခြားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမ၏ ထူးခြားသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် သိပ္ပံ၊ စိတ်ဝိဥာဉ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုလောကကို ပေါင်းကူးကာ ကမ္ဘာကြီး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုခချမ်းသာများကို ရှုမြင်ပုံတို့ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ သူမသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်သည့် ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကို ပြန်လည်ရယူရန် ကူညီပေးသည်။
အလိုလိုသိသော ကုထုံးများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမားရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် - ခန္ဓာကိုယ် စိတ်နှင့် ဝိညာဉ်
Barbara သည် Dimepiece LA နှင့် Peaches and Screams တွင် လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Barbara သည် လူတိုင်းအတွက် လိင်အကြံဉာဏ်ကို ပိုမိုရရှိနိုင်စေရန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်းအသီးသီးရှိ လိင်ဆိုင်ရာအမည်းစက်များကို ချိုးဖျက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အမျိုးမျိုးသော ပညာရေးဆိုင်ရာ အစပျိုးမှုများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ သူမ၏အားလပ်ချိန်များတွင်၊ Barbara သည် Brick Lane ရှိ ခေတ်ဟောင်းစျေးကွက်များမှတစ်ဆင့် နေရာအသစ်များကို ရှာဖွေခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့် စာဖတ်ခြင်းတို့ကို နှစ်သက်သည်။
SEABEDEE CBD ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
“လုပ်နည်း” စာရေးဆရာမ Vivien Schapera က သူနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့သည် အွန်လိုင်းမှ အောင်လက်မှတ်သင်တန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ပုံကို မျှဝေထားသည်။
အားလုံးက ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ စတင်ခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ ပြဿနာတွေ ပိုများလာတယ်။ Flatbike, Inc. သည် အရွယ်အစားပြည့် ခေါက်စက်ဘီးများကို ဖြန့်ဖြူးပါသည်။
စိတ်အားတက်ကြွစေသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ငန်းအမည်နှင့် ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ အာဖရိကသည် စည်းချက်ညီသော ဂီတနှင့်တူသည်။
Sound Bites Nutrition LLC ကို မှတ်ပုံတင်ထားသော အစားအသောက်ပညာရှင် Lisa Andrews မှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး လည်ပတ်ပါသည်။ Lisa ပါ။
Coaching သည် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်စကားလုံးဖြစ်လာသည်။ များစွာသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် အခေါ်အဝေါ်နှင့် ဖလှယ်သည်။